XOG: Arrin sii fogeyneysa Khilaafka Farmaajo & Axmed Madoobe oo Muqdisho ka socota | Baahin Media
XOG: Arrin sii fogeyneysa Khilaafka Farmaajo & Axmed Madoobe oo Muqdisho ka socota
Warar hoose ayaa sheegeya in Magaalada Muqdisho kulamo kala duwan ay ka wadaan Siyaasiyiinta Mucaaradka ee kasoo horjeeda Madaxweyne Axmed Madoobe.
Siyaasiyiintan isbedel doonka ah ayaa Shirar ku yeelanayay Muddooyinkii ugu dambeeyay Magaalada Muqdisho, iyadoo Waxgaradka beelaha qaar ee kasoo jeeda deegaanada Jubbaland ay ku qanciyeen aragtidooda iyo hamigooda ku aadan inay maamulaan Jubbaland oo doorashada sanadkan dhaceysa looga adkaado Axmed Madoobe.
Sidoo kale Siyaasiyiintan Mucaaradka ku ah Madaxweynaha Jubbaland ayaa wada kacdoon ay iskaga hor keenayaan beelaha qaar uu ku tashanayo Axmed Madoobe, iyadoo beelaha qaarkood ay si cad ugu sheegeen madaxweynaha Jubbaland inay kasoo horjeedaan, dalbadeena in xilka uu ka dego.
Mucaaradka ayaa shirar xooggan ka waday magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi, waxaana hogaaminaya rag Axmed Madoobe ku beel ah, oo ay ka go’an tahay in xilka laga tuuro, ama marka waqtigisia dhammaado uu ka dego.
Axmed Madoobe ayaa dhinaciisana iminka billaabay inuu casuumo, oo uu wada­hadla la furo odayaasha beeshiisa iyo kuwa beelaha kale, isaga oo doonaya inuu kursiga kusii fadhiyo.
Abaabulkan ka socda Magaalada Muqdisho ayaa dhibaato weyn ku noqonaya heshiis isku soo dhawaansho ah oo dhex mara Axmed Madoobe iyo Madaxweyne Farmaajo maadaama khilaafkooda uu ka bilowday in Villa Somalia ka dambeyso kulamada Muqdisho ka dhacaya ee looga soo horjeedo maamulka Axmed Madoobe.
Hoggaamiyaha Jubbaland ayaa wararku ay sheegayaan inay ka go’an tahay inuu waqtiga kororsado marka xilkiisu dhammaado, hase yeeshee taasi ayaan sahlanaan doono, maadaama xitaa beeshiisa ay ku kacsan tahay.